Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 October Ọkwọ ule mbụ na 2016 Eurasia Tunnel ... - RayHaber
HomeGeneralTaa na akụkọ ihe mere eme: 9 October Ọkwọ ụgbọala mbụ n'ime Eurasia Tunnel ras
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme 0
9 October A nyere Mr. Alfred Kaulla ikike maka 1890 Thessaloniki-Monastery Line, na-emechitere otu òtù German nke jikọtara na Bank Bank. E nyere ya Feriz America n'oge gara aga.
9 October 1918 Toros na Amanos tunnels na-agwụcha. Ewu ya malitere na 1914.
9 October 1940 Na-achọ maka iwu Elazığ-Palu akara 5 ka TL nde Haymil İnş. Ltd. SRK. E nyere ya.
Onye isi ala 9 October Recep Tayyip Erdoğan mere nnwale ule mbụ ya na Ọdụ Eurasia.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 October 2016 na-ebu ụzọ nyocha mbụ ya n'olulu Eurasia ... 09 / 10 / 2017 Taa na History 9 October A nyere Mr. Alfred Kaulla ikike maka 1890 Thessaloniki-Monastery Line, na-emechitere otu òtù German nke jikọtara na Bank Bank. E nyere ya Feriz America n'oge gara aga. 9 October 1918 Toros na Amanos tunnels na-agwụcha. Ewu ya malitere na 1914. 9 October 1940 Na-achọ maka iwu Elazığ-Palu akara 5 ka TL nde Haymil İnş. Ltd. SRK. E nyere ya. Onye isi ochichi nke 9 bụ President Recep Tayyip Erdoğan mere nyocha ụzọ mbụ ya n'Ọdọ Mmiri Eurasia.
Turkey mbụ obodo tram 'Silkworm ule mbanye ga-eme ka Prime Minister 27 / 11 / 2012 Turkey mbụ obodo tram 'Silkworm abịa ogbo nke ẹkụre ule, mgbe na-anata dị mkpa nkwado na-ebudatara na rails nke ụgbọ okporo ígwè ụgbọala mbụ ule mbanye ga-eme ka Prime Minister Recep Tayyip Erdogan kọrọ. Bursa Mayor Recep Altepe, oge nke ule ọrụ Bursaray Care Center na Turkey mbụ obodo tram 'Silkworm kwuru na na ọgwụgwụ ogbo nke ike ule. Mgbe emechara ule ahụ, a ga-etinye ụgbọ ala ahụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, na-egosi na Altepe kwuru, sị: '' Ụgbọ ala ahụ chọrọ iji rụchaa ọrụ ndị dị mkpa ma ugbu a, anyị na-atụ anya ka ịnwale ule. Mgbe usoro nke ịkwado ule ahụ amalite. E nwere ụfọdụ òtù zuru ụwa ọnụ. Nke a na-enyekwa anyị ụlọ ọrụ Bu
Emepụta Bursa, Turkey mbụ amaala tram Silkworm praịm minista ga-eme ka na-akwọ ụgbọala ule 28 / 11 / 2012 Turkey mbụ amaala tram emepụta Bursa silkworm si ule ga-eme ka praịm minista ndị na-akwọ ụgbọala Turkey mbụ amaala tram Silkworm ule ndị na-na ogbo nke ẹkụre mbụ ule mbanye n'okporo ụzọ ígwè ga-ebudatara na okporo ígwè ụgbọala mgbe inweta ndị dị mkpa nkwado e kọrọ Prime Minister Recep Tayyip Erdogan ga-eme ka . Bursa Mayor Recep Altepe, oge nke ule ọrụ Bursaray Care Center na Turkey mbụ obodo tram 'Silkworm kwuru na na ọgwụgwụ ogbo nke ike ule. Mgbe emechara ule ahụ, a ga-etinye ụgbọ ala ahụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, na-egosi na Altepe kwuru, sị: '' Ụgbọ ala ahụ chọrọ iji rụchaa ọrụ ndị dị mkpa ma ugbu a, anyị na-atụ anya ka ịnwale ule. Mgbe usoro nke ịkwado nlele ahụ amalite
AdaRay na-eme ka ule ule mbụ ya 27 / 03 / 2013 AdaRay mere ule ule mbụ ya Ọrụ Metropolitan obodo dị n'etiti ọdụ ụgbọ okporo ígwè Adapazarı na Arifiye maka ụgbọ okporo ígwè mechara wuo. Ụgbọ okporo ígwè ahụ kwadebere na TÜVASAŞ wee wuchaa ya ma mee ka nke mbụ gaa na ọdụ. A na-arụzi ụgbọelu ndị a rụrụ n'etiti Adapazarı na Arifiye n'ime usoro ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-adịbeghị anya. A na-emezi ọzụzụ na TÜVASAŞ. Ugbo ala na ugboala, nke ejiji na TÜVASAŞ maka njem ugbo, nke a ga-eme n'okpuru aha AdaRay, nke na-adọta uche ya na ugbua na nkasi obi ya, ugbua ule nyocha nke 11.00 taa. Mgbe ogologo oge gasịrị, ụgbọ okporo ígwè ahụ zọghachiri ọzọ, na-agafe n'ogo cross AdaRay ...
Nnwale ule na Epuzia Eurasia (Video) 09 / 10 / 2016 Ejiri ụgbọala nyochaa n'Ọdọ Mmiri Eurasia: Onye isi oche Recep Tayyip Erdoğan gara ileta ebe Eurasia nke a na-eme atụmatụ imeghe n'ọnwa Disemba. Erdogan, praịm minista Binali Yildirim na Minista Ụgbọ njem, Maritime Affairs na Communications, Ahmet Arslan, gafere ebe ahụ ma nweta ozi sitere n'aka ndị ọchịchị. N'ikwu okwu mgbe a nwalere ule a, Onye isi oche Erdogan, "N'agbanyeghị itinye ego niile ga-aga n'ihu," ka o kwuru. Imepe nyocha nke nyocha 20 Eurasia Tunnel, bụ nke a ga-enwe na December President Erdogan, "Mba anyị ga-aghọta ihe ndị a na-atụ anya ya kemgbe ọtụtụ narị afọ. ezigbo ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 October 2016 na-ebu ụzọ nyocha mbụ ya n'olulu Eurasia ...
Turkey mbụ obodo tram 'Silkworm ule mbanye ga-eme ka Prime Minister
Emepụta Bursa, Turkey mbụ amaala tram Silkworm praịm minista ga-eme ka na-akwọ ụgbọala ule
AdaRay na-eme ka ule ule mbụ ya
Nnwale ule na Epuzia Eurasia (Video)
Taa na akụkọ ihe mere eme: 31 August 2016 Ihe nyocha nke mbụ nke Keçiören Metro ...
Apaydın, Tepeköy-Selçuk Emere Ule Mbụ na IZBAN Line
President Ay na-eduzi nyocha nke nyocha Nostalgic Tram
Minista Arslan na-agba Başkentray Ule
Minista nke Ego Mehmet Şimşek mere ụgbọala nyocha nke Gaziantep Metropolitan Municipality Light Rail System